हिमालसँग लुकामारी खेल्दै… – Pramb's Weblog
छिरींग ग्याल्चोनकी छोरी…
हामीलाई पदयात्रा सुरु गर्न गाडीले मध्य दिउँसो धुन्चेमुनिको ठूलो भार्खुमा झारिदियो। सुरुमा सबैको जाँगर देखियो। सहयात्रीले सडक ’roundका प्लास्टिक कतै नछोडी टिप्न थाले। अहो! यस्तो पाराले लाङटाङ यात्रा सकेर हामी कहिले फर्किउँला काठमाडौँ! आउँदो साता परीक्षा छ। म त्यसलाई भन्दा घुमफिरलाई महत्व दिएर केही दिन मन बहलाउन निस्किएकी। मलाई उनीहरूको सक्रियताले मन पोल्न थाल्यो। तर, मेरो पिरलो त्यति दिगो भएन। सरसफाइ अभियान एउटा प्रतीक थियो। काठमाडौँमा बस्नेले हिमाली क्षेत्रको फोहोर बटुलेर के साध्य! त्यो देखेर पर्यटक र स्थानीयले चकलेट, चाउचाउ र अन्य प्लास्टिक सामान नफालून् भन्ने एउटा अभियान न हो! फर्कँदा हामीसँग तीन धोक्रा प्लास्टिक थिए।
यात्रामा सुनिल र असनाको जोडी छ। चार वर्षदेखिको प्रेम जोडी। उनीहरू’bout पहिल्यै थाहा पाएकाले यस जोडीलाई ‘शिव-पार्वती’ नाम दियौँ। क्याङजिन पुगेकै दिन उनीहरूले त्यहाँको हेलिप्याडमा ढुंगाको प्रेम प्रतीक बनाए। ढुंगाले बनाएको मुटुबीच दुवै जनाको नाम। मैले प्रेम प्रतीक माथिपट्टि बसेर उनीहरूले आकाश हेरेको फोटो खिचेँ। उनीहरूको प्रेम दिगो रहोस्।
ओम माने पेमे होम्
सुनिल र असनाको जोडी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा वातावरण विज्ञान पढिरहेका अर्बिन राई, कृष्ण तिमिल्सिना र टानमा कार्यरत सोविता राईले योजना बनायौँ। ‘हामीसँग हिमाल चढ्ने जोश छ भने त्यो केन्जिङ रिको उचाइमा किन नपुग्ने,?’ मैले हौस्याएँ।
त्यति ठाडो उक्लनुपर्ने डाँडाको हिँडाइ सहज छैन। मैले समूहलाई उक्साउन झ्यालबाट हिमाल देखाएँ। अघिल्लो दिन नजाने मनस्थिति बनाएकी बनिताले पनि जाने हुटहुटी देखाइन्। हामी आठ जनाको समूह बिहान ४ बजेर २० मिनेटमा उकालो लाग्यौँ। जाँदा असनाले बनितालाई हिँड्न नसकेको भनेर जिस्काइन्। बनिता के कम -‘तिम्राजस्ता शिवसँगै भए त हामी कैलाश चढिसक्थ्यौँ।’
सुनील र असनाको जोडी…..:)
हिमालको फोटो खिच्दै म
कस्तो चिच्चाहट आँशु झर्ने……:)
थोरैमात्र पर्यटक क्याङजिनबाट ५१ सय मिटरको ग्यान्जला पास हुँदै हेलम्बु जान्छन्। लाङटाङ जाने अघिल्लो साँझ मैले गुगलमा हिमाल हेरेको थिएँ। लाङटाङ’bout पढेको थिएँ।
पवित्र लाङटाङ मान्छेलाई देखाउन भगवान्ले एउटा गोरुलाई साथी पठाएको विश्वास गरिँदो रहेछ। गोरु लाङटाङको घाँसे मैदानमा आएर निदायो। गोठालाले देखे। गोरु अघाएको हुनाले त्यस ठाउँको नाम ‘लाङडाङ’ भनियो। भोट भाषामा लाङडाङ शब्दले गोरु अघाएको बुझाउँछ। त्यस ठाउँलाई जनबोलीमा लाङडाङ भन्न थालियो। पछि अपभ्रंस हुँदै लाङटाङ भनियो।
हामी क्याङजिन पुगेको दिन केटाहरूले अनावश्यक जिस्काएको भन्दै छिरिङ झिँझिएकी थिइन्। फर्कँदा हामी ब्याम्बुमा बस्यौँ। यहाँ छिरिङ होइन, २५ वर्षीया डोल्मा लामा छिन्। उनी समानताको कुरामा चाख राख्दी रहिछन्। पाहुनासँग एकसरो औपचारिकतापछि उनले हाम्रो समूहका केही पुरुषको सातो लिइन्, ‘के हो तपाईँहरू त श्रीमतीलाई खुट्टा ढोगाउनुहुन्छ रे, खुट्टाको पानी खुवाउनुहुन्छ रे।’
हाम्रो टोली उनको वाकपटुता देखेर चकित भयो। बिहान निस्कँदा पनि उनले भनिन्, ‘तपार्इँहरूकहाँ त्यस्तै हुन्छ? हाम्रो त माया गर्ने बेला माया गर्छ, हेप्यो भने हामी पनि छाड्दैनौँ।’
This entry was posted in नागरिक घुमफिर and tagged Asana,Dhunche,Dolma Lama,Ganesh Himal,Ghumgham,Kyanjing Gumba,LangSisa,Langtang,Langtang Trekking,meditation,Mountains,Sunil,Trekking agencies Association of nepal,Tsering Gyalchon. Bookmark the permalink.
← मुद्दा फिर्ता निर्णय सर्वोच्चले रोक्यो
अनि, उ टुहुरो भयो ! →
One thought on “हिमालसँग लुकामारी खेल्दै…”
lkafle | जुन 18, 2012 मा 2:26 बिहान